Horohorontany mahafaty no nandrava an'i Kroasia
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Horohorontany mahafaty no nandrava an'i Kroasia
Horohorontany mahery vaika sy mahafaty no namely an'i Kroasia androany, izay niteraka fahavoazana lehibe.
Ny tanàn-dehibe Kroaty Zagreb dia tratry ny horohoron-tany nahatratra 6.4 ny haavony, niaraka tamin'ny sary ny fahavoazana naterak'izy ireo nanerana ny media sosialy.
Ankoatry ny fahasimban'ny firafitra, faritra sasany ao Zagreb dia voalaza fa nisy fahatapahan'ny herinaratra, ary ny tanàna iray manontolo dia nanana olana tamin'ny telefaona sy ny internet. Nandritra ny horohoron-tany dia maro ny olom-pirenena nihazakazaka nivoaka tamin'ny tahotra.
Ny tanànan'i Petrinja dia iray amin'ireo toerana tena iharan'ny horohorontany. Ankizy iray no maty nandritra ny horohoron-tany, raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Nilaza ny ben'ny tanànan'i Petrinja, Darinko Dumbovic, tamin'ny mpanao gazety fa ny sampana mpamonjy voina dia miasa amin'ny famoahana ny olona hiala amin'ny fiara voasakana, saingy mbola tsy fantatra ny isan'ireo naratra sy maty. Raha ny filazan'ny ben'ny tanàna dia zaridaina roa no nianjera tao Petrinja - soa ihany fa tsy nisy navela ny iray, ary nafindra soa aman-tsara ny zaza tamin'ilay faharoa.
Nanambara ny praiminisitra Kroaty Andrej Plenkovic fa ho any Petrinja izy hanombatombana manokana ny toe-javatra.
Ny horohoron-tany koa dia nahavoa ny faritra sasany tao Slovenia mpifanila vodirindrina aminy, nahatonga ny firenena hanidy ny tobim-pamokarana nokleary ho fitandremana.
Ny mpampiasa Twitter sasany aza nizara ny horonantsary momba ilay horohoron-tany lehibe nihahery vaika nandritra ny fivorian'ny Antenimieram-pirenena tany Slovenia, izay toa nanosika ireo mpanao lalàna hiala.
Ny horohoron-tany tamin'ny talata no faharoa amin'ny zava-mitranga ankehitriny, taorian'ny loza nitranga tany 5.2 tamin'ny alatsinainy teo. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, tamin'ny volana martsa, dia nahatratra 5.3 no namely an'i Zagreb, ka olona 27 no naratra ary iray no maty.
Rosiana Aeroflot dia mamerina ny sidina mpandeha any Warsaw